Caneva - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady ?? Jona 2019 - Alahadin'ny Sampana Vokovokomanga sy Hetsika gasigasy
Alahadin ny sampana vokovokomanga
“Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka sady hofenoina ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny aza.” Lioka 1 : 15
Fifaliana roa sosona no natrehan’ny Fiangonana androany satria ity no fotoana natoka fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Sampana Vokovoko Manga , manerana ny sahan’ny FJKM. Ho antsika eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe famonjena dia natao indrindra izany fotoana izany ho ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Vokovoko Manga. Isaorana ny Tompo ihany koa fa ankehitriny dia miverina indray eo anivon’ny Sampana , ny fisian’ny RANTSANA FANANTENANA. Nanasa manokana ny Mpitandrina RASOLOFOMANDIMBY Mamisoa Olivier izy ireo , hitondra ny tenin’Andriamanitra. Izy dia mpitandrina ao amin’ny FJKM Angodongodona Miray, SP Antananarivo Atsimo, sady Birao Foibe ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga.
Anisan’ny nanamarika ny fotoana androany ihany koa ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny Fankalazana ny Asaramanitra noho ny fahatongavan’ny fitsingerenan’ny fahaleovantenan-mpirenena ka nanehoan’ny Fiangonana ny maha-malagasy azy. Nomarihan’ny mpianakavin’ny finoana tamin’ny fanaovana ny fitafiana gasigasy izany ary horesahantsika any am-pamaranana ny hetsika notontosaina tamin’izany.
Ny fitarihana ny fanompoam-pivavahana sy ny fotoana rehetra dia niandreketran’ireo mpikamba ao amin’ny Sampana vokovoko Manga. Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe METEZA HO FENOINA NY FANAHY MASINA isika ankehitriny. Ny litorjia voalohany fampiasa eto anivon’ny FJKM no notanterahina
FANOMBOANA NY FOTOANA
Ny filohan’ny Sampana Vokovoko Manga , Ratoa RAZAFIMBELO Holy no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana tamin’ny Fiarahabana Apostolika izy ary nampahatsiahy ny anton’izao fanompoam-pivavahana izao dia noraisin’ny Mpianakavin’ny finoana ho fiderana an’Andriamanitra ny SALAMO 1 : “Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin’ny fisainan’ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin’ny lalana falehan’ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin’ny fipetrahan’ny mpaniratsira; Fa ny lalàn’i Jehovah no sitrany; eny ny lalàny no saintsaininy andro aman’alina.
Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akofa aelin’ny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hahajanona eo amin’ny fitsarana, na ny mpanota eo amin’ny fiangonan’ny marina. Fa fantatr’i Jehovah ny lalan’ny marina, fa ny lalan’ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin’ny fahaverezana. Amen”. Rehefa izany dia nohiraina ny hira faha 8 “Dera, Laza, Hery, Haja” ho fiderana an’Andriamanitra
Nambaran’ny mpitarika tamin’izany fa tena mendrika sy rariny tokoa ny hisaorana ilay Andriamanitra Masina, noho Izy tsy mitsahatra miantso antsika hanatona Azy mandrakariva. Midera Azy isika fa mpanolontsaina Hendry Izy sady Mpiari-dàlana fa raha tsy Izy dia tsy ho toy izao ny fiainantsika. Midera Fanahy Masina isika fa tsara antoka ny fiainantsika miaraka Aminy. Ary ataony mameno antsika isan’andro izany. Tsy manaraka antsika amin’izay tiantsika Izy fa mananatra antsika sy manome torolalana . Misaotra Azy fa afaka miombona amin’izao fanompoana masina izao. Misaotra Ny Tompo noho ny Sampana vokovoko Manga sy ny namerenana indray ny Rantsana Fanantenana. Misaotra ny Tompo fa afaka nijoro vavolombelona teo amin’ny sehatra misy ny tsirairay. Isaorana ihany koa ny Tompo noho ny maha –Malagasy antsika. Ny fanahin’ny Tompo anie mba hiasa aty anatintsika, ahatonga antsika ho fanatitra velona sy masina ary sitrak’Andriamanitra.
FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA :
Ny sitrapon’Andriamanitra dia nalaina tao amin’ny Efesina 5 : 15-18, araka izao manaraka izao : “Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo. Ary aza ho mamon-divay ianareo, fa amin’izany dia misy fanaranam-po amin’ny ratsy, fa aoka hofenoina ny Fanahy. Amen” Nohiraina ny hira 203 : 3 “Fanahy masina ô! tariho izahay” ary natao ny vavaka fifonana.
Tamin’izany no nanambarana fa manoloana ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana dia tsy tanteraka izany fa ny mifanohitra amin’izany aza no notanterahantsika.Nanao izay tsy maha-mendrika teo anatrehan’Andriamanitra isika na tamin’ny fiteny na tamin’ny fitondran-tena. Nanara-po tamin’ny ratsy ka nanalavitra ny Tompo. Mahatsiaro menatra isika ka tsy sahy akory ny hifanatri-tava amin’ny Tompo. Koa mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy amin’ny Tompo. “Diovy izay ho afa-pahotana ary sasao madio izahay mba ho afaka heloka.”.
Niara-niredona ny hira FF 4 :2,3 “Ry Fanahy ô ! monenany” ny Fiangonana ary dia nanadray ny teny famelan-keloka.
Izao no teny famelan-keloka izay nambara amin’ny anaran’ny Tompo : Apokalypsy 3: 10-11 “Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana ianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany. Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao” Natao ny hira faha 489 : 1 “tena Sambatra sy mahate-ho tia” ho fisaorana ny Tompo noho ny famelan-keloka Taorian’izany no nanambaràn’ny Fiangonana ny finoany tamin’ny fanambaràna ny fanekem-pinoana faha-efatra.
I Zoky Louisa no nanatanteraka izany ka ny teny ao amin’ny soratra Masina araka ny SALAMO faha 46 : 1 “Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy”, no nitondrana ny hafatra sy notadidian’ny fiangonana androany: Nisy ny tantara kely nentiny namehy izany tenin’ny Soratra Masina izany ary taorian’izany dia nanao vavaka izy nanambarany fa ny Tompo no ARO sy HERY ary MPAMONJY antsika.
Ny mpitantsoratra Ratoa RAKOTOARISOA Meva no nanatanteraka izany ary ny teny ao amin’ny I Timoty 5: 22 “Tehirizo ho madio ny tenanao” ; izany no teny nentiny nanombohana ny tatitra sy niarahabana ny mpianakavin’ny finoana.
Ny antom-pisian’ny Sampana Vokovoko Manga dia hanampy ny olona hifady sy hiala amin’ny zava-mahadomelina sy ny zava-mahamamo.
Raha jerena amin’ny ankapobeny dia ireto no asa notanterahin’ny Sampana nanomboka ny volana Jona 2018 hatramin’ny anio.
Teo amin’ny tanjona ara-panahy dia teo ny tafika Masina notanterahina tany amin’ny Synodam-paritany Atsimon’i Iarivo Miray sy tany Matehilaza , SPAAndrefana.. Nisy ny Famerenana indray ny Rantsana Fanantenana . Nisy ny asa fanafahana notanterahina niaraka amin’ny Sampana Sekoly alahady.
Teo amin’ny tanjona Asa Vavolombelona kosa no nahitana ny fandraisana anjara tamin’ny filharambe teny Mahamasina. Teo ihany koa ny fivarotana ranomboakazo ary nisy ny fitsidihana ny akany Avozo eny Faravohitra. Teo amin’ny asa fifandraisana dia nahitana ny fandraisana anjara amin’ireo lalao ara-pirahalahiana, ny fifampiarahabana amin’ny taona vaovao, ny lasy fanabeazana ary ny famangiana ireo zokiolona. Tsy adino ny fiofan’ny birao. Tao anatin’ny herinandro-bokatra dia nanatanteraka famelabelaran-kevitra izy ireo. Taorian’ny tatitry ny sampana dia nolazaina ny hafatra avy amin’ny foibe ary rehefa izany dia nisy ny hira notanterahan’ny sampana , nialohavan’ny hiaka fanentanan nataon’ireo Rantsana fanantenana .
Ny biraom-piangonana Atoa Mamy RAZAFIMAHARO no nanatanteraka izany ary natombony tamin’ny fiarahabana ny Fiangonana , tamin’ny alalan’ny teny araka ny Romana 8: 5 izany. -Amin’ny fanamarihana ny faha 200 taonan’ny sekoly FJKM dia hisy ny Antsmpanahy izay hotontosaina ao amin’ny FJKM Analakely ny faha 30 jona ho avy izao amin’ny 3 ora hariva. -Herinandrom-bokatry ny FDL – Ny RFF dia hanatontosa antsampanahy – vavaka ho an’ny tanindrazana sy ho an’ny mpanala fanadinana ny talata 25 Jona ho avy izao.
VOADY SY RAKI-PISAORANA :
Ireto no hira nangatahan’ny vahoakan’Andriamanitra nanao izany: FFPM 20: 1 / FF 41 : 1/ FFPM 2:1 / FFPM 242 : 1 / FF48: 1. – Tao ny nisaotra an’Andriamanitra fa lafo ny tranony – Tao ny nisaotra an’Andriamanitra fa afaka fanadinana – Tao ny nangataka amin’ny tompo ny hitahiana ny zanany – Nisy ny mpianakavin’ny finoana tonga mandalo eto an-toerana ka misaotra an’Andriamanitra Rehefa natolotra ireo voady dia notanterahina ny rakitra ka natao ho fanolorana izany ny hira 275 : 1 “Raisonao ry Tompo soa” Mialoha ny vavaka ho amin’ny soratra Masina dia natao ny hira 175: 1, 5 “Avia Fanahy o!”
FITSENANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA
Mialoha ny vakiteny dia nisy ny vavaka nataon’i atoa ANDRIANIRINA Haingoniaiko Ny vakiteny dia notanterahin’i atoa RANDRIAMASIMANANA Jean yves. Ireto no, perikopa voalahatra : MIKA 3 : 6-8 / Lioka 1 : 8-17 / Jakoba 4: 1-10
Ny mpitandrina Rasolofomandimby Mamisoa Olivier izay efa voatolotra tetsy ambony moa no nitory ny tenin’Andriamanitra. Teo am-panomboana ny toriteny dia niarahaba ny Fiangonana izy ary niarahaba manoka ny Sampana vokovoko manga izay manatanteraka ny ivom-bokatra ankehitriny. Ny hafatra dia nalaina tao amin’ny Lioka 1: 15. Io tenin’ny Soratra Masina io dia azo hisintonana lohahevitra hoe : “NY MPANOMPON’ANDRIAMANITRA MALAGASY FENO NYFANAHY MASINA”.
Ary amin’izany dia ndeha hijery zanakevitra roa isika :
A- Ny mpanompon’Andriamanitra Malagasy Feno ny Fanahy Masina dia tsy misotro divay na toaka.
Anjely no niteny tamin’i Zakaria fa ny zaza izay haterany dia ho mpialoha lalana an’i Kristy ka tsy hisotro divay na toaka izy. Mila fenoina ny fanahy Masina isika. Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra. Kristy dia nanambara fa mahatsara anareo ny fialako mba ahatongavan’ny mpananatra aminareo dia ny Fanhy Masina
Ny Fanahy Masina no tombokasen’ny zanak’Andriamanitra. Izy no mampahatsiaro ny asa nataon’i Jesoa Kristy.Izy no mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra. Ny mpanompon’Andriamanitra feno ny fanahy masina toa an’i Jaona eto dia tsy nahazo misotro divay na toaka. Ny toaka na ny divay mantsy dia heverina fa rehefa misotro azy ny olona dia mampiditra ny fanahy ratsy ao amin’ny olona izany.
Mazava ary fa tsy afaka miaraka ny toaka sy ny fanahy masina. Satria tsy afaka miara-mipetraka ao amin’ny mpanompon’Andriamanitra ny fanahy ratsy sy ny fanahy Masina.
B- Ny mpanompon’Andriamanitra Malagasy , feno ny Fanahy Masina dia Asandratr’Andriamanitra :
“Ary ho lehibe eo anatrehan’ny Tompo izy”.(and 15) : I jaona mpanao batisa dia nasandratrAndriamanitra ho mpaminany lehibe nefa olona tsotra ihany.. Nanaiky ny toromarika natao taminy i Jaona mpanao batisa ka nasandratra ho lehibe eo antrehan’ny Tompo. Heverina fa tsy i jaona mpanao batisa ihany fa izay rehetra manatenteraka ny sitrapon’Andriamanitra dia asandratr’Andriamanitra ho lehibe. Ny hoe lehibe eto dia izay hametrahan’Andriamanitra fitokisana ary izay mahatoky no manana anjara amin’ny fiainana mandrakizay.
Ny tanjon’ny Finoana Kristiana dia ny fanjakan’Andriamanitra koa izay rehetra manaka ny asan’Fanahy masina tsy ho ao anatinao dia hialao
Nanatanteraka ny anjara hirany ny RFF, taorian’ny toriteny , tamin’ny alalan’ny hira hoe “Madagasikara o! Tahio”.
Teo amin’ny famaranana ny fotoana dia nanao ny vavaka fangatahana , ny mpitandrina ka nentina am-bavaka manokana tamin’izany ny sampana Vokovoko manga sy ny Rantsana fanantenana. Nivavaka ho an’ny kristiana rehetra, nivavaka ho an’ny firenena ary nivavaka ho an’ireo mpianakavin’ny finoana nanao raki-pisaorana sy voady. Natao avy eo ny hira FF 33 : 3 “Inty aho” ary novakiana ny Tondrozotra 2019-06-23 izay nialoha ny fametrahana ny Tsodrano. Natao ny hira 734 : 1 no notanterahina tamin’ny fiafaran’ny fotoana Marihana moa fa rehefa vita izany rehetra izany dia niroso indray tamin’ny fanatrehana ny Ankatoky ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo , ny Fiangonana.. tamin’izany no nifidiana ireo mpandini-bola vaovao hiasa mandriatra izao fotoam-piasana vaovao izao. Teo ihany koa ny fifidianana izay ho solontenan’ny mpandray ao amin’ny komitin’ny Akany Rainimamonjy.
Rehefa nifarana ny ankatoky ny fandraisana dia niroso tamin’ny Asaramanitra , fanehoana ny maha-malagasy azy ny Fiangonana.Teo amin’ny tokontan’ny Fiangonana no nanatanterahina izany. Izany moa dia ao anatin’ny Fankalazana ny fahaleovantenam-pirenena. Niavaka ny fitafy nataon’ny isambatan’olona. Ny sampana sekoly alahady dia niavaka tamin’ny akanjo mena. Tsy ny fitafy ihany no naseo teto fa teo ihany koa ny fanehoana ireo sakafo tiantsika malagasy toa ny henakisoa sy voanjobory , ny henomby ritra. Tazana teny ny mangahazo miaraka amin’ny voanio sy ny maro hafa tsy voatanisa. Nisy ny hira mampiavaka ny maha-malagasy antsika notanterahin’ny zanaky ny fiangonana
Soratra : Rabako A.Tovohery
Sary : ANDRIAMAMPIANINA Faneva
Naka ny feo : RABEMANANORO Jonathan
Fafana : RATIARISON Joris
Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery ; Naka ny sary : Faneva Andriamampianina